Ntuziaka nke onye na-amalite ọrụ
a>chọta ndị ruru eru tozuru oke ọrụ na ụlọ ọrụ gị nwere ike ịbụ ọrụ n'onwe ya. Ozugbo ịchọtara nwa akwukwo zuru oke, ikwesiri igha ha ego iji mezue usoro a.
Ọrụ ndị ọrụ bụ ụzọ dị mma iji kọwaa ihe atụmanya na ihe ọhụụ nke ụlọ ọrụ ọhụụ. Akwụkwọ ndị a na-enyere aka ichebe ndị were gị n'ọrụ na ndị ọrụ. nkwekọrịta
bia n'ụdị na nha niile. N'ọtụtụ ọnọdụ, akwụkwọ ozi enyere gị na akwụkwọ ọrụbịanyere aka n'akwụkwọ nwere ike ịbụ ihe zuru oke iji kpuchie ntọala niile ahụ. Ọ na-abụkarị maka ọdịmma gị iji mepụta nkwekọrịta nkwekọrịta. Nke a bụ ihe omimi miri emi banyere ụfọdụ ihe ndị a na-ahụkarị iji tinye na nkwekọrịta ọrụ:
nkọwa Job, ọrụ ya na ọrụ ya
Nke a bụ akụkụ dị oke mkpa nke nkwekọrịta ọrụ ọ bụla. Akwụkwọ ahụ kwesịrị ịkọwa n'ụzọ doro anya atụmanya na ibu ọrụ nke ọnọdụ a na-ekwu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-ego ihe nkesa na-eri nri, ịkwesighi ịgbakwunye nkọwa dịka "na-ewere iwu ndị ahịa ”na“ iweta nri na tebụl ”na ngalaba a nke nkwekọrịta ahụ. N'otu aka, ndị a bụ akụkụ doro anya nke ọrụ ahụ. Maka onye ọzọ, gụnyere ọtụtụ nkọwa a kapịrị ọnụ na-emeghere ndị ọrụ ohere ịsị “ọ bụghị ọrụ m” mgbe ị gwara ha ka ha mee ihe. n'ime otu edemede atọ: oge ​​niile, oge ma ọ bụ oge.
Ọtụtụ ndị were mmadụ n'ọrụ na-agụ 40 awa dị ka ọrụ oge niile. Ma nkọwa iwu nke ọrụ oge niile dịgasị iche site na steeti gaa na steeti. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ steeti na-akọwa ọrụ oge niile dị ka awa 32 kwa izu. Ọrụ nwa oge na-adịkarị n'etiti awa 20 ruo 30 kwa izu, mana ọ nwere ike pere mpe karịa ihe a na-ahụta oge niile na steeti a.
Usoro nke ọrụ nwa oge zuru oke na oge ogeA na-akọwa ha na ụlọ ọrụ na-adịgide adịgide na-enweghị akara akara ụbọchị njedebe. Mmekọrịta a ga-enwe ụbọchị mbido na ụbọchị njedebe na nkwekọrịta ahụ. N'adịghị ka ndị ọrụ ngo nọọrọ onwe ha, a na-ewere onye ọrụ oge ọrụ dị ka onye ọrụ oge niile maka oge nkwekọrịta ahụ. . Nke a bụ eziokwu ọkachasị ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ ga-arụ ọrụ oge adịghị anya, dịka abalị na ngwụcha izu. ndokwa maka "ọ masịrị gị" ọrụ. Nke a pụtara na otu onye ọ bụla nwere ike ịkwụsị mmekọrịta ahụ, na enweghị ihe kpatara ya, n'oge ọ bụla.
"Ọrụ ndị ọzọ" nwekwara ike ịkọwa ebe a. Dịka ọmụmaatụ, anaghị ekwe ka ọtụtụ ndị ọrụ gọọmentị etiti nweta ọrụ nke abụọ nke megidere ọrụ gọọmentị ha. >
Akụkụ a kwesịrị ịkọwapụta ụgwọ ọnwa, ụgwọ ọrụ ma ọ bụ ọrụ nke onye ọrụ nke nkwekọrịta abụọ ahụ kwuburu n'etiti ndị otu abụọ ahụ. Gụnye oge ịkwụ ụgwọ, ozi ọ bụla gbasara usoro nhazi ma ọ bụ nhọrọ nha anya na nkwekọrịta ahụ. Nke a nwere ike ịgụnye 401 (k), Medicare, eze, uru ndị na-agagharị agagharị, ezinaụlọ na ezumike ahụike, akaụntụ nchekwa ahụike, wdg. oru ohuru ohuru. Ọ bụrụ na urunwere ike ịgbanwe, ọ kacha mma ịhapụ ha na nkwekọrịta ahụ.
contractsfọdụ ọrụ nkwekọrịta na-agụnye nkewa nkebi. Ọ bụ ezie na ịnweghị ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ, ọ nwere ike inye aka mee ka ndị ọrụ nwee ahụ iru ala ma mee ka ha nwekwuo ike ịbịanye aka na nkwekọrịta ahụ. ọrụ onye ọrụ na onye were ya n'ọrụ ga-ahụrịrị mgbe nkwekọrịta ahụ gwụsịrị.
employeesfọdụ ndị ọrụ nwere ike ịchọ ịbanye na nkwupụta, enweghị ịrịọ arịrịọ ma ọ bụ asọmpi. Nke a na-egbochi ha ịkọrọ izu nzuzo azụmaahịa ma ọ bụ izu ndị ahịa ohi.
ofdị nkwekọrịta ndị a dịgasị iche dabere n'ụdị azụmahịa na ọnọdụ a na-ekwu.
Dịka ọmụmaatụ, onye ọka iwu na-arụ ọrụ maka iwu Enwere ike machibido ụlọ ọrụ ịtọlite ​​ụlọ ọrụ ha n'ime okirikiri kilomita 80 ruo afọ abụọ mgbe ha gụsịrị ọrụ n'okpuru edemede na-abụghị asọmpi>
mgbe ọ bụla gakwuru onye ọka iwu nkwekọrịta nwere ahụmahụ mgbe ị na-ede ụdị akwụkwọ ndị a iji jide n'aka na ha na-agbakwunye iwu yana na ị nwetara nchedo ịchọrọ. Ọnọdụ ọ bụla dị na akwụkwọ ndị a nwere ike ọ gaghị eguzo n'ụlọ ikpe.
Ngwaọrụ 5 iji melite nkwekọrịta ọrụ
contractsmepụta nkwekọrịta ọrụ nwere ike ịdị ka ọrụ siri ike, ọkachasị onye mbido. Mana ngwaọrụ ise a ga - eme ka ndụ gị dị mfe na usoro a niile:
bụ onye ndu na ụlọ ọrụ akwụkwọ iwu n'ịntanetị. Ha na enyere ndi ahia aka na ndi obere aka ha na oru nke sitere na oru ndi mmadu ruo na okike. Maka naanị $ 39.99 kwa ọnwa, ị nwere ike ịmepụta ọtụtụ nkwekọrịta ọrụ dịka ị chọrọ.Onye ọka iwu maka $ 39.99 kwa akwụkwọ. Mana ụgwọ ọnwa ọ bụla dị mma karịa, ebe ị ga-eritekwa uru na ụfọdụ ọrụ ọka iwu. Nwere ike iji Onye ọka iwu Rocket maka NDA, ndị na-adịghị asọmpi, ndị na-arịọghị arịrịọ, wdg.
Gbalịa ya n'efu na ule ụbọchị asaa
enyela ọrụ iwu na ihe karịrị 4 nde ndị ahịa na ihe karịrị nde ụlọ ọrụ 2, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na online iwu ngwọta dị. Ikpo okwu na-abịa na ndebiri nkwekọrịta ọrụ ị nwere ike ịhazi na nkeji. Naanị zaa ajụjụ ole na ole dị nro, na LegalZoom ga-emezigharị nkwekọrịta ọrụ maka gị na akpaghị aka. gịnwere ike ịchọrọ n'oge usoro ego. Nwekwara ike ịgakwuru ndị ọka iwu ha iji nye gị azịza ajụjụ gị yana iji hụ na nkwekọrịta ndị ahụ dị mma.
Atụmatụ azụmahịa LegalZoom na-amalite na $ 31.25 kwa ọnwa .
a BambooHR bụ ihe niile-na-otu ọrụ mmadụ na ngwaọrụ na mbanye, na-ego na mwekota nke ọhụrụ ọrụ. Akụrụngwa a na-abịa na njirimara mbinye aka elektrọnik iji nyere gị aka ịkọwa ahụmịhe onboarding. Nwere ike kesaa nkwekọrịta ọrụ ma nakọta mbinye aka site na ụgwọ ọrụ ọhụụ nke ọma. Ozugbo agwakọtara ya, ndị ọrụ niile na-ekwenye na ozi ndị ọzọ nwere nsogbuenwere ike ịchekwa ha na nchekwa data ndị ọrụ gị BambooHR. Kpọtụrụ BambooHR maka nkwupụta na ngosipụta ibido
Ọ bụrụ na ị dị njikere ike ọrụ nkwekọrịta ma ị maghị ebe ị ga-amalite, PandaDoc ị kpuchie. Nwere ike iji usoro a iji nweta akwụkwọ nkwekọrịta ọrụ maka n'efu. Ihe ị ga - eme ugbu a bụ imejupụta ihe ụlọ ọrụ gị na ụgwọ ọrụ ọhụụ gị, ị ga - adị mma ịga. workflow ngwaọrụ. Akụrụngwa bụ nghazi njikwa nkwekọrịta zuru oke, yabụ enwere ọtụtụ atụmatụ dị jụụ iji mee ka ndụ gị dịkwuo mfe. Atụmatụ na-amalite na $ 19 kwa ọnwa, ị nwere ike ịnwale ya n'efu ụbọchị 14.
bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na aha a kacha mara amara na mbinye aka na kọmputa. Ihe karịrị ndị ahịa 750,000 ejirila ikpo okwu a iji kwado ọtụtụ narị nde mmadụ ndebanye aha gburugburu ụwa. Sọftụwia a zuru oke maka mbinye aka elektrọnik na njikwa ndụ ndụ. Ma ị kwesiri ime ya maka otu onye ọrụ maọbụ na ịchọrọ ịgbazite n'ọtụtụ buru ibu, DocuSign ekpuchila gị. Atụmatụ na-amalite site na $ 10 kwa ọnwa ma ị nwere ike ịnwale ya n'efu na nnwale ụbọchị 30.
Ndụmọdụ 4 maka Creatmepụta Ọrụ Ọrụ
Iji Nweta Ọtụtụ Ọrụ Ahụmịhe ọrụ gị , soro ndụmọdụ ndị a ngwa ngwa na omume kacha mma. Dị ka onye mbido, ndụmọdụ ndị a dị mfe ga - eme ka ndụ gị dị mfe.
Atọcha # 1: Jiri usoro nkwekọrịta ọrụọ
Creatmepụta akwụkwọ iwu site na ibe oghere na-eyi egwu, ọ bụghịkwa ihe m nwere ike ịkwado na obi ike. Kama ịrụsi ọrụ ike karịa ka ọ dị mkpa, bido site na nkwekọrịta ọrụ iji gosipụta ya , dị nnọọ dejupụta usoro na ọrụ nke ụlọ ọrụ gị na otu onye ọrụ ahụ. Nwere ike ịgbakwunye, hapụ, ma ọ bụ mezie ndebiri ndị a ka ọ dabaa na mkpa gị. Ọtụtụ ozi ga-anọ ebe ahụ. N'ọtụtụ oge, ọ bụ naanị ịgbanwe aha onye ọrụ, ụbọchị mbido ya na nkọwa ịkwụ ụgwọ ya.ndị nnọchi anya ọrụ mmadụ abụghị ndị ọka iwu. Mgbe ọ bụla ị na-emepụta nkwekọrịta iwu kwadoro, ị kwesịrị ị na-achọ ndụmọdụ site na ndụmọdụ ndụmọdụ iwu. . M N’ọnọdụ ụfọdụ, a dọrọ akwụkwọ ndị ahụ nke ọma nke na ha agaghị eguzo n’ụlọ ikpe.
Zere isi ọwụwa ndị ahụ site na ịkpọ ekwentị na nkeji ise. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike iji ọka iwu kpaa nkata na ntanetị. Ọbụlagodi na ịchọrọ iji aka gị mepụta akwụkwọ ahụ, gbaa mbọ hụ na onye ọka iwu gị nyochara ya tupu iziga ya na ụgwọ ọhụụ maka mbinye aka. isi ọwụwa na ego ị ga-akwụ na nkwekọrịta shoddy.ekwesighi inwe nkwekọrịta. Nwere ike ịchekwa oge dị ukwuu site na ịhapụ nkwekọrịta kpamkpam ma ọ bụrụ na ọrụ ahụ achọghị ya.
ikekwe achọghị iwu akwụkwọ iwu dị ogologo. Ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa na etiti ma na-ego CFO ọhụrụ, nkwekọrịta ọrụ ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị. dịkwa mma ebe a. Nke a bụ eziokwu karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ ozi dị nro. Ndụmọdụ # 4: Gbanwee mgbanwe Ọ dị mkpa ịghọta na nkwekọrịta ọrụ abụghị otu ụzọ. Ndi otu abuo (onye oru ha na ndi were ha n’ọrụ) na nkwekorita ahu na echekwa ha abua.nọ na nkwekọrịta nke na-abara ha uru ozugbo, naanị ịchọpụta na nkwekọrịta ahụ anaghịzikwa egbo mkpa ha n'ọdịnihu. Ma ọnwa isii gachara, azụmahịa gị na-eto, ị na-ahazigharị ma kpebie na ịchọghị ọrụ ahụ ọzọ. A ga-ahụta ịchụpụ onye ọrụ a na enweghị ihe kpatara ya dị ka mmebi nke nkwekọrịta, ọ bụrụhaala na onye ọrụ ahụ na-adịgide ruo ngwụsị nke nkwekọrịta ahụ. ọdịnihu.
Ihe ị ga - eme na-esote
Ugbu a ị ghọtara ihe bụ isi nke nkwekọrịta ọrụ, oge eruola ịmalite ịmepụta akwụkwọ ndị a maka ndị ọrụ ọhụụ. chọrọ imeziwanye akụkụ ọ bụla nke ego ọrụ na usoro ịbanye, jiri sọftụwia HR. Ihe kacha mma software HR ga-enyere gị aka melite recrutting workflows na ijikwa usoro ndụ dum nke ndị ọrụ. siri ike nkwekọrịta njikwa nkwekọrịta
5 kacha mma mmekọ mmekọ masking plugins (+ 3 atụmatụ iji mụbaa ahịa)
2021-06-19 14:50:26 | Weebụsaịtị
Na-achọ ntanetịime njikọ njikọta kachasị mma maka saịtị WordPress gị, mana ejighị n'aka maka nhọrọ kacha mma? chọrọ ijide n'aka na ha nyere aka na ahụmịhe njirimara gị (UX), na-akpali ntụkwasị obi na ndị na-ege gị ntị, ọ bụ ha bụ...
34 kacha mma wordpress omume gburugburu na 2021
2021-06-19 05:38:18 | Weebụsaịtị
I dowere ndị na-ekwu okwu gị. I gbula ebe. A na-ahazi kalenda maka T. I meela ndepụta ndị ọbịa ma ị dịla njikere izipu akwụkwọ ịkpọ oku. Ugbu a, ihe ị ga - eme bụ ịkpọsa ihe omume gị kachasị ọhụrụ, yana kedu ụzọ kacha mma iji mee nke ahụ karịa iji otu weebụsaịtị? Votu...
8 kacha mma WordPress WordPress plugins
2021-06-19 05:28:20 | Weebụsaịtị
Pinterest nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 500 nde ndị ọrụ na-arụ ọrụ kwa ọnwa, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime saịtị mgbasa ozi kachasị mma n'ụwa na nhọrọ kachasị maka ịkwọ ụgbọala ruru eru na ebe nrụọrụ weebụ WordPress gị. blog posts, ihe oyiyi na eserese na bọtịnụ òkè Pinterest. Ọ na-eme ka ọdịnaya gị...
Kasị mma n'ịtụgharị shopify Mmeju store gburugburu ntọt revenue
2021-06-18 13:41:52 | Weebụsaịtị
Kachasị mma Shopify Ntugharị Mgbakwunye Storelọ Ahịa tolọ ahịa iji mụbaa Ego Azụmaahịa raara nye micro-niche ọ bụla na-aghọwanye ndị a na-achọpụta ma na-arụ ọrụ mgbe ha nọ na weebụ. Nchọgharị Google bụ ebe mbụ onye ahịa nke oge a na-ezo aka mgbe ọ na-achọ ụdị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ kwesịrị ekwesị iji ...
Usoro kachasị mma iji nye saịtị gị ọkachamara aka
2021-06-18 13:37:07 | Weebụsaịtị
Na-eche echiche ịmepụta windo ndị ahịa na azụmaahịa IT gị? Ọzọ, ịkwesịrị ijide n'aka na weebụsaịtị gị na-ejere gị ozi. Some chọrọ ụfọdụ mmụọ nsọ? Jiri nlezianya pịgharịa na nchịkọta kọmputa WordPress gburugburu n'okpuru ma lelee ma ọ bụrụ na enwere ihe maka gị. Ahụmịhe onye ọrụ na-eji ire ụtọ yana m...
19 kachasị mma-njikere omenka website ndebiri 2021
2021-06-18 13:30:53 | Weebụsaịtị
Bụ onye okike dị ka gị, ọ dị oke mkpa iji nyere gị aka ịmepụta mkpokọta agba agba iji otu ndebiri websaịtị kachasị mma anyị kwadebere maka gị. na-efu efu Gosiputa nzuzu gi na oru di itunanya ma nweta oru site na enyemaka nke webusaiti di egwu. Na-akwalite onwe gị na nka gị wee bido ac...
26 Ndị ọrụ ndebiri na ebe nrụọrụ weebụ ọkachamara maka Ace 2021 Web Presence
2021-06-18 13:18:01 | Weebụsaịtị
Ndị mmadụ okike, ụlọ ọrụ, azụmaahịa na ụlọ ọrụ, ndebiri ndebiri ọrụ dị njikere ịtụgharị ha na weebụsaịtị nrụọrụ. Gbasawanye ohere gị ma bulie ikike gị ruo nke kachasị elu. Site na narị otu narị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ puku ngwaahịa dị, anyị ejirila ndepụta nke nke kachasị mma na nke kachasị ekwe...
Mmalite nke Nduzi Ọrụ Ndị Ọrụ
2021-06-17 05:34:51 | Weebụsaịtị
A na-eleda mkpa nke HR na azụmaahịa anya. Ọ bụ otu n'ime ngalaba kachasị egwu n'ihi na ọrụ ndị dabara n'okpuru ụdị ndị ọrụ HR bụ akụkụ dị mkpa nke azụmaahịa ọ bụla. Ọrụ ego bụ ọhụụ ọhụrụ nke ịkpọtụrụ maka azụmaahịa a, yana usoro ọ bụla na - eme n'ụzọ, gụnyere nkwalite, mgbanwe ụgwọ ọnwa, wdg. na-aga...
Otu esi emepụta ego ịkwụ ụgwọ
2021-06-17 04:49:43 | Weebụsaịtị
O doro anya na ịkwụ ụgwọ ụgwọ bụ otu n'ime mmefu azụmahịa kachasị, nke na-agbakọ ihe dịka 20% nke mmefu nzukọ. Ileghara ihe a dị oke mkpa anya nwere ike ibute ngwa ngwa na njikwa azụmahịa. Site na ndị ọrụ na-agbanwe agbanwe, ị chọghị bọọlụ kristal iji kọwaa ụgwọ ụgwọ ọnwa gị maka afọ ahụ. Budgetkwụ ...
2021-06-17 04:04:35 | Weebụsaịtị
MyCompanyWorks adịla ihe dị ka afọ iri abụọ. Kemgbe ọtụtụ afọ, ha enyerela aka mebe ụlọ ọrụ 60,000 gafee ọtụtụ ụlọ ọrụ na steeti 50. Ha na-enye ọrụ mmalite azụmaahịa maka ụlọ ọrụ LLC, ụlọ ọrụ C, na ụlọ ọrụ S. Nhọrọ dị mfe, ọnụ ala na ịdị mfe nke iji Ihe ikpo okwu a bu ihe ole na ole n'ime ihe mere o...
2021-06-16 06:34:49 | Weebụsaịtị
2021-06-16 03:39:14 | Weebụsaịtị
2021-06-13 22:08:46 | Weebụsaịtị
2021-06-13 13:57:41 | Weebụsaịtị
2021-06-12 20:14:42 | Weebụsaịtị